Abtidoon, Da’ud Ibssa iyo Berhanu Nega oo la Kulmay TEWODROS ADHANOM – Rasaasa News
Abtidoon, Da’ud Ibssa iyo Berhanu Nega oo la Kulmay TEWODROS ADHANOM
Jul 20, 2009 ethiopia, Jwxo-shiilada
from left Berhanu, Abtidoon and Ibssa
Xil ninkuu dhibayey dhimay Xuusaan iyo xornimo diidna kolba xus bay galayaan ee xagee dadweynow loo socdaa rag iyo xoolaba beelaye….
Warar hor dhac ah oo naga soo gaadhaya magaalada Washington ee dalka Maraykanka ayaa waxay xaqiijinayaan in uu kulan laba geesood ah ku dhexmaray ururada mucaaradka Itobiya oo dhinac ah iyo xukuumada Itobiya oo dhinac ah.
Kulankan oo uu dilaal ka yahay ninka madowga ah ee u ololeeya midaynta Itobiya Donald Payne, oo ah nin ay u caruur dhashay gabadh Xabashi ah, ayaa waxaa uu iska dhigaa in uu yahay nin ka xun dhibaatooyinka ay xukuumadu ku hayso dadweynaha Itobiya, sida ay runtu tahayse waxaa uu jecel yahay midnimada Itobiya.
Donald Payne waxaa uu muddo dheer doonayey in uu mar xal u helo mucaaradka iyo xukuumada si ay Itobiya u hesho nabad buuxda.
Hadaba, waxaa maalintii Jamcaha ahayd Doland Payne u suurto gashay in uu ku kulmiyo gurigiisa Wasiirka Caafimaadka ee Itobiya Tewodros Adhanom iyo mucaaradka ka kala socda dhawr qoomiyadood, oo kala kala socda dhawr koox oo ku kala duwan fikirka. Kooxahan oo kala ahaa garab Axmaaro ah oo matalayey Berhanu Nega, garab Ormo ah oo uu matalayey Da,ud Ibssa iyo garab Somali ah oo matalayey garabka Jwxo-shiil Cabdiraxmaan Maadeey.
Warku ma sheegin wax go,aan ah oo ka soo baxay kulanka laba geesoodka ah, laakiin waxaa uu warku sheegayaa in ay hal meel ku wada qadeeyeen iyaga oo aad u faraxsana ay ku soo kala tageen kulankii guriga Donald Payne.
Garabka Jwxo-shiil, ayaa waxay aad u doonayeen baryahanba sidii ay u heli lahaayeen jid [escape way], waxaan bishii January dhamaaadkeedii baryo midan la mid ah Maraykanka u tagay Maadey iyo Ina Ismaciil, laakiin xiligan way u suurto gali wayday Ina Ismaaciil waayo waxaa ku socda dacwad ay su,aalo ku waydiinayso dadlada Australia.
Waxa kasta oo ka soo baxa kulanka waxaa waxba kama jiraan ka dhigi kara Garabka ONLF ee uu madaxda ka yahay Engineer Salaxudiin Cabdiraxmaan Mao oo ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya haatan aad ugu kalsoon yihiin hogaamintiisa, isaga oo jecel in uu ku hogaamiyo ururka mabaadiidiisa aas aasiga ah.
Arintan oo qarsoodi ah balse ay wada og yihiin wax garadka Somalida Ogadeeniya, waayo Somalidu ma ah dad qarin kara sirta oo dhaqdhaqaaqooda waxaa ogaan kara dadweynaha sida mida Maadeey oo soo noqnoqodkiisa ay dadku isweydiin.
Si kastaba arintu ha ahaatee waxaa aynu isha ku hayn doonaa, isbedelka ka yimaada Itobiya iyo sii awood daraynata ururada Itobiya oo hada u muuqda kuwo laga guulaystay, ka dib kolkii ay iyagu ku heshiin waayeen sharciga.
Dhulka Somalida Ogadeeniya ayaa haatan waxaa ka jira xoog ciidan oo Somali ah oo ay abuurtay xukuumada Itobiya, kuwaas oo isku balaadhiyey xuduud dheer ee Somaliya. Waxaa kale oo aad u wiiqantay awooda ururka ONLf, mid ciidan, mid taageero dadweyne iyo mid siyaasadeedba, Waxaa kale oo aan la iska indho tiri karin ururka aadka u soo koray ee qaatay taageeradii dadweynaha Somalida Ogadeeniya waa JXSG.
la soco warbixin dheer oo xigi doonta warkan…..
rasaas baa runta sheegee rafiiqaaga ha yeelo……